ရခိုင်နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းဖြစ်တည်မှု အထင်ကရ သမိုင်းခုနှစ်များ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သီတဂူဆရာတော်ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားဟော/ အလှူခံဖို့ လာရောက်လိမ့်မယ် သီတဂူမှ ရိုဟင်ဂျာများနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်များအပေါ် စော်ကားပြောဆိုခဲ့မှုများ/လိမ်ညာခဲ့မှုများ တို့ ကို ဖြေရှင်းချက် တောင်းခြင်း- တရားဝင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်
အံ့သြလွန်းလို့ … သေတော့မယ် မဟန… »
ရခိုင်နိုင်ငံရေး၊ တော်လှန်ရေး ဖြတ်သန်းဖြစ်တည်မှု အထင်ကရ သမိုင်းခုနှစ်များ
Thuzar Mdy Thuzar Mdy
သမိုင်း အဘယ်သို့ ရှိ ဘိ *****
ရခိုင်စာ .. ရခိုင်ကဗျာ … ရခိုင်အနုပညာ
ရခိုင်ပြည်နယ် အချုပ်အခြာအာဏာ ကျဆုံးသည့် နေ့မှသည် မျက်မှောက်ကာလထိ နှစ် (၂၂၇နှစ်)၊
(အေဒီ – ၁၇၈၅ မှ အေဒီ – ၂၀၁၂ ထိ)
AD – ၁၇၈၅ – ဇွန်န၀ါရီ (၂)ရက် မြောက်ဦးမြို့တော် ကျဆုံး
– ဇွန်န၀ါရီ (၁၁)ရက် ဘုရင်မဟာသမ္မတရာဇာ ဖမ်းဆီးခံရ။
– မဟာမုနိကို အမရပူရသို့ ရွှေ့၊ ရခိုင်ကို မြို့ဝန်လေးစုဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုစတင်။
AD – ၁၇၈၇ – ငပေါလုံး၏ ဗဒုံမင်းအား ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုများ ကြီးမားလာ။
AD – ၁၇၈၈ – မင်းညီမင်းသား၊ ရဟန်းတော်များ၊ ပညာသည်များ၊ ကိုယ်ရံတော်၊ သူငယ်တော်၊ မိန်းမစိုး စသော လူရှင်ရဟန်းတို့ကို အမရပူရသို့ ဖမ်းဆီးယူဆောင်ခံရ။ နန်းတော်ရပ်သည် တစပြင်ဖြစ်သွား။
AD – ၁၇၈၉ – ဇင်းမယ်သို့ စစ်ချီရာတွင် ရခိုင်မှ တပ်သား (၆၀၀၀) စုဆောင်းပေးခဲ့ရ။
AD – ၁၇၉၃ – ငပေါလုံးတော်လှန်ရေး လှုရှားမှုများသည် အမြင့်ဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့။
AD – ၁၇၉၄ – စစ်တကောင်းတွင် တိမ်းရှောင်နေသော ငပေါလုံး၊ ငခွက်ပေါက်၊ ကျွဲတစ်ကောင်နိုင်
တို့အား၊ ရခိုင်မြို့ဝန်သို့ လွှဲပေးခဲ့ရ။
AD – ၁၇၉၅ – ဇွန်လတွင် ရခိုင်တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်း ငပေါလုံး၊ ငခွက်ပေါက်တို့ကို အဆုံးစီရင်၊
ကျွဲတစ်ကောင်နိုင်က ဆင်ဖြူကျွန်းသို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့။
AD – ၁၇၉၇ – မင်းကွန်းခေါင်းလောင်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် လူ ၂၀၀၀ကျော် လုပ်အားပေးရန် တောင်းဆို၊
ယင်းကို မလိုလား၍ ဆန့်ကျင်ပုန်ကန် ကြသူများနှင့် ချင်းပျံစတင်၍ ပူးပေါင်း၊
မြို့ဝန်အုပ်ချုပ်ရေး ကျွန်စနစ်ဆိုးကြောင့် ရခိုင်ငါးသောင်းခန့် စစ်တကောင်းနယ်သို့ သွားရောက်ခိုလှုံ။
AD – ၁၇၉၈ – ငတုံးစံ၊ ငကာစွယ်၊ တုံးစံရွေတို့ တိုက်စည်တိုက်မောင်း တီး၍ ပုန်ကန်ထကြွကြ၊
စိန်တင်စားချင်းပျံသည် ရခိုင်တော်လှန်ရေး သမားများနှင့် ပူးပေါင်း။
AD – ၁၇၉၉ – ချင်းပျံတပ် စစ်ရေးနိမ့်၍ စစ်တကောင်းသို့ ခိုဝင်သွား။
AD – ၁၈၁၁ – ချင်းပျံပြန်လည်၍ ထိုးစစ်ဆင်ပြီး ရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဗမာဘုရင် မောင်ဝိုင်းတပ်များ၏ အင်အားကြီးမားမှုကြောင့် ထိုးစစ်မှ ခံစစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍ ရဲဘော်ရဲဘက် တစ်သိန်းနှင့် တောထဲသို့ ရှောင်တိမ်းခဲ့။
AD – ၁၈၁၂ – ချင်းပျံ တတိယအကြိမ် ထကြွ၊ ကိုးလကြာမြင့်ခဲ့။
AD – ၁၈၁၂ – ၁၈၁၇
– ဆန်စပါးရှားပါးပြီး ထမင်းငတ်မွတ်၍ လူများစွာ သေဆုံးမှုက တော်လှန်ရေးကို တုံ့ဆိုင်းစေခဲ့။
AD – ၁၈၁၅ – ဇန်န၀ါရီ (၂၅)ရက် တွင် ရခိုင်တော်လှန်ရေး သူရဲကောင်း ဗိုလ်ချင်းပြန် ဖလောင်းချိတ်အရပ်၌ ကွယ်လွန်။
AD – ၁၈၁၆ – ရခိုင်တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်သွားခဲ့။
AD – ၁၈၂၄ – အမရပူရ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ရခိုင်အရေး နှိမ်နှင်းသူ ဗန္ဓုလ ပန်းဝါကိုတိုက်၊ စစ်ပွဲတွင် စစ်ရှုံး၍ ပြန်ဆုတ်။
ရှင်မဖြူကျွန်း အရေးအခင်းဖြစ် (အင်္ဂလိပ်ခေတ်)
AD – ၁၈၂၅ – ဗြိတိသျှတပ်များ ရခိုင်ပြည်သို့ဝင်၊ မြောက်ဦး (ဧပြီ-၂)၊ ရမ်းဗြဲ(ဧပြီ-၂၂)၊ မာန်အောင်(မေ-၆) တို့တွင်သိမ်းယူ။
AD – ၁၈၂၇ – မင်းသားကြီး ရွှေဗန်း အင်္ဂလိပ်တို့ကို စတင်တော်လှန်။
AD – ၁၈၂၉ – ဦးမောင်သာဦးတို့ စတင်တော်လှန်။
AD – ၁၈၃၂ – ကျိန္တလီဘုန်းကြီး ဦးဆောင်တော်လှန်။
AD – ၁၈၃၄ – ရခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဘင်္ဂလားနယ်မှ ခွဲထွက်၊ တိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်။
AD – ၁၈၃၆ – ဇန်န၀ါရီလတွင် လေးမြို့သူကြီး ချစ်စံဝေတို့ တော်လှန်၊ ချစ်စံဝေ အဖမ်းခံရ။
AD – ၁၈၅၃ – တောင်ကုတ်နယ်တွင် တော်လှန်မှုစတင်။
AD – ၁၈၆၃ – တောင်ကုတ်နယ်တွင် ဗိုလ်ကျော်ဝ ဦးဆောင်တော်လှန်မှု ထင်ရှားလာ။
AD – ၁၈၆၄ – သံတွဲခရိုင် တောင်ပိုင်း ဂွနယ်ကို ရခိုင်တိုင်းသို့ ပြန်သွင်း။
AD – ၁၈၆၅ – ရခိုင် မြောက်ဖျားဒေသကို စစ်တွေခရိုင်မှ ခွဲထုတ်အုပ်ချုပ်။
AD – ၁၈၆၇ – စစ်တွေနှင့် ကျောက်ဖြူတွင် ဦးမောင်ဖြူတို့ တော်လှန်။
AD – ၁၈၇၁ – ဦးမောင်ဖြူ အဖမ်းခံရ။
AD – ၁၈၈၇ – ရခိုင်တောင်ပိုင်းတွင် ကျောက်စိမ်းဗိုလ်နှင့် ဇော်ဂျီဗိုလ်တို့ တော်လှန်။
AD – ၁၈၉၀ – သံတွဲတွင် ရဟန်းတစ်ပါး၊ ကျောက်ဖြူတွင် ဗိုလ်မောက်၊ ဂွတွင် ဗိုလ်ကြာထွန်း၊ ဦးလှရွေ၊ ဗိုလ်ကျော်ဝတို့ တော်လှန်။
AD – ၁၈၉၁ – မစဲကမ်းမှ ဦးမောင်ဖော်အောင် ဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးစတင်။
AD – ၁၈၉၂ – ဦးမောင်ဖော်အောင်နှင့် အတူ ဖခင်ဦးချင်းပို ဖော်ဝါရီလတွင် အဖမ်းခံရပြီး စစ်တွေထောင်တွင် အကျဉ်းချခံရ။
AD – ၁၉၀၆ – ဦးစိန်လှအောင် (YMBA) အသင်းကို တည်ထောင်ပေးခဲ့။
AD – ၁၉၁၀ – ဦးမဲအောင်အား နောင်ပေါ်မည့် ဂျီစီဘီအေ (GCBA) အသင်းတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးချယ်။
AD – ၁၉၁၈ – ရခိုင်ပြည်အသင်းကို ထူထောင်။
AD – ၁၉၂၀ – ကျောက်တော်နှင့် စစ်တွေတို့တွင် အမျိုးသားကျောင်းများ တည်ထောင်။
AD – ၁၉၂၂ – ရခိုင်သံဃာသမဂ္ဂီကိုဖွဲ့။
AD – ၁၉၂၃ – ဒိုင်အာခီ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် မဲပေးကြရ။
AD – ၁၉၃၀ – ရခိုင်တိုင်းလုံးဆိုင်ရာ ကြီးပွားရေး အဖွဲ့ချုပ်ကို တည်ထောင်လှုပ်ရှား။
AD – ၁၉၃၄ – ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ဆင်းရဲသားအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၃၆ – ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ လူငယ်များ နိုးကြားရေး အစည်းအရုံးကို တည်ထောင်။
AD – ၁၉၃၇ – အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ပဏ္ဍစ်နေရူး စစ်တွေသို့ ရောက်ရှိ။
AD – ၁၉၃၉ – ရခိုင်ဆင်းရဲသား အဖွဲ့နှင့် လူငယ်များနိုးကြားရေး အစည်းအရုံးတို့ ညီလာခံကျင်းပ။
ရခိုင်နိုင်ငံရေး ကိစ္စကို ရခိုင်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ကိုဘစံနှင့် သခင်အောင်ဆန်း စတင်ဆွေးနွေး။
AD – ၁၉၄၀ – ဆင်းရဲသားအဖွဲ့နှင့် လူငယ်များပူးပေါင်းပြီး (ANC) အနေဖြင့် ညီလာခံကျင်းပ။
AD – ၁၉၄၂ – ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား (၁၈)ဦးကို အင်္ဂလိပ်က ဖမ်းပြီး အိန္ဒိယထောင်သို့ ပို့၊ ကျန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ တိမ်းရှောင်ရ။
– ဘီအိုင်အေတပ်များ ဘူးသီးတောင်မှ ဆုတ်၊ ရခိုင်စစ်ပြေးများစွာ သင်္ဘောနစ်မြုပ်၍ သေဆုံးရ။
AD – ၁၉၄၃ – ရခိုင်ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ကို မြောက်ဦးတွင် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ စတင်ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၄၄ – ရခိုင်တွင် ဂျပန်ကို စတင်တော်လှန်မည် ဖြစ်ကြောင်းကို ရန်ကုန်သို့ အသိပေး။
AD – ၁၉၄၅ – မြန်မာပြည်တွင် အစောဆုံး တော်လှန်မှု အဖြစ် ပြဒေးစခန်းမှ စတင်၍ ဂျပန်ကို တော်လှန်။
AD – ၁၉၄၆ – ရခိုင်ဖဆပလများ တောကန်ညီလာခံ ကျင်းပ။
– ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စစ်တွေတွင် စည်းရုံးရေး တရားဟော။
AD – ၁၉၄၇ – ရခိုင်တပ်ပေါင်းစု ညီလာခံကို မြေပုံတွင် ကျင်းပ။
– ရခိုင်ကွန်မြူနစ်များ ရခိုင်ဖဆပလမှ ခွဲထွက်၊ မယူနယ်တွင် မူဂျာဟစ်များ ထကြွ။
AD – ၁၉၄၈ – ဇန်န၀ါရီ (၄) တွင် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်။
AD – ၁၉၄၈ – ရခိုင်တိုင်း ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၄၉ – ရခိုင်ရှိ ပြည်ထောင်စုတပ်နှင့် ပြည်သူ့ရဲဘော်တို့ တောခို၊ မူဂျာဟစ်များ သောင်းကြမ်း။
AD – ၁၉၅၀ – အစိုးရတပ်များ မြို့ဟောင်း၊ တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင် မြို့ များကို ပြန်လည် သိမ်းယူ။
AD – ၁၉၅၂ – အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရခိုင်တစ်သီးပုဂ္ဂလ အမတ်များ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၅၃ – ရတည ကိုဖွဲ့စည်း၊ မူဂျာဟစ်စခန်းများ တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက်။
AD – ၁၉၅၄ – ရခိုင်သံဃာ သမဂ္ဂီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့။
AD – ၁၉၅၅ – ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ အစည်းအရုံးကို တည်ထောင်၊ ဘုံပေါက်သာကျော်နှင့် အဖွဲ့ မင်းပြားတွင် အလင်းဝင်။
AD – ၁၉၅၆ – ပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရတညမှ (၄၆) ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖဆပလမှ (၅၄) ရာခိုင်နှုန်း ရရှိ။
AD – ၁၉၅၇ – ရခိုင်တောခို ပြောက်ကျားများ အလင်းဝင်။
AD – ၁၉၅၈ – ဦးစိန္တာနှင့် အဖွဲ့ မင်းပြားတွင် လက်နက်စွန့်၊ ကွန်မြူနစ် ပါတီမှ ဗိုလ်အောင်ကျော် နှင့် အဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ရဲဘော် ဗိုလ်စံသာကျော် တပ်ဖွဲ့၊ ဦးကျော်ထွန်း၏ တပ်ဖွဲ့၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ဂွမြို့နယ် တို့မှ ပြည်သူ့ ရဲဘော် အဖွဲ့တို့ လက်နက်စွန့်ကြ။ ရခိုင်အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့။
AD – ၁၉၆၀ – ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရခိုင်အမတ် နေရာများတွင် ရတညမှ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖဆပလမှ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရရှိ။
AD – ၁၉၆၁ – မူဂျာဟစ် (၂၉၀) ဦးအလင်းဝင်။
AD – ၁၉၆၃ – ရခိုင်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှင့် တော်လှန်ရေးပါတီ တို့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆွေးနွေး။
AD – ၁၉၆၇ – ကျောက်တော်ကို ဗကပတို့ ၀င်စီး၊ ဆန်ရှားပါးမှုကြောင့် စစ်တွေတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်၊ ဆန်တောင်းခံ ဆန္ဒပြသူများအား တပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရခိုင်သူ/သား ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရ (သြဂုတ် – ၁၃)။
AD – ၁၉၆၈ – အမ်းမြို့ကို ဗကပ ဗိုလ်သက်ဆွေနှင့် အဖွဲ့ ၀င်စီး။
AD – ၁၉၇၀ – မင်းပြားကို ဗကပတို့ ၀င်စီး။
AD – ၁၉၇၁ – အမှတ် (၇) ဒေသပါတီ အမည်ဖြင့် ရခိုင်တိုင်းအတွက် ဒေသပါတီကို ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၇၂ – ANUP ပါတီမှ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ကြီးကြာလှအောင် အလင်းဝင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ကို စစ်တွေတွင် ဖွင့်လှစ်။
AD – ၁၉၇၃ – ALP ပါတီခေါင်းဆောင် ပီတာဘချိုတို့ အလင်းဝင်သည်။ ကုလားဇော်ဖား ဌာနချုပ်ကို တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက်။
AD – ၁၉၇၄ – ရခိုင်တိုင်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ် ဟု ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်။
AD – ၁၉၇၃ – ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်း ထောင်မှ လွတ်မြောက်။
AD – ၁၉၇၄ – ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်း ဦးဆောင်သော ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဖွဲ့စည်း။
AD – ၁၉၇၆ – ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်း နှင့် တပ်ဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်သို့ စစ်ကြောင်းခရီး စတင်၍ ချီတက်။
AD – ၁၉၇၇ – ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ခိုင်မိုးလင်း ချင်းပြည်နယ် တွန်းဇံတံတား အနီးတွင် မိမိကိုယ်ကို အဆုံး စီရင်ခဲ့။ (ဇန်န၀ါရီ ၄)
အေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင် ဦးစံကျော်ထွန်း ဟုမ္မလင်း တောတွင်းတွင် ကျဆုံး။ (ဇူလိုင် ၂၄)
AD – ၁၉၈၀ – AIA ဥက္ကဌ ထွန်းရွှေမောင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ကျော်ဇံရွှီ၊ ဗိုလ်သက်ထွန်းတို့ အလင်းဝင်။
AD – ၁၉၈၈ – ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသား များသည် ရခိုင်အမျိုးသား သမဂ္ဂကို ဖွဲ့စည်း၍ အမျိုးသားရေး ဆန္ဒများကို ထုတ်ဖော်ပြသ။
AD – ၁၉၉၀ – မေလရွေးကောက်ပွဲ၊ ရခိုင်ပါတီများတွင် ALD မှ အင်အားအကောင်းဆုံးကို ပြသခဲ့။
AD – ၁၉၉၂ – ALD ဖျက်သိမ်းခြင်း ခံရ။
AD – ၁၉၉၆ – ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြမှု ရခိုင်သို့ ကူးစက်။ ကျောင်းသားအချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရ။
AD – ၂၀၀၇ – ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်မားမှုကြောင့် စစ်တွေမှ ရဟန်း၊ ပြည်သူများ စတင်ဆန္ဒပြ။
AD – ၂၀၀၉ – စစ်တွေမှ အမျိုးသားရေးရာ တက်ကြွသူ လူငယ်တစ်စု ထိန်းသိမ်းခံရ။
AD – ၂၀၁၀ – RNDP စတင်ဖွဲ့စည်း။
AD – ၂၀၁၂ – RNDP ရာနှုန်းပြည့် မဲရရှိမှုဖြင့် အင်အားအကောင်းဆုံး ပါတီဖြစ်လာ။
AD – ၂၀၁၂ – ……………………………………… ??? .
၁။ ရခိုင်ပြည် နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်သမိုင်း
၂။ သီရိဝစ္ဆ အမှတ် (၁)
၃။ မဇ္ဈိမဒေသ အရေးတော်ပုံကျမ်း
၄။ စစ်တကောင်းမှသည် ရန္တပိုဆီသို့
RNDP တိုးတက်ရေး သတင်းလွှာ အတွဲ – ၁၊ အမှတ် – ၁၄၊ (၃၀၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁) က
ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
This entry was posted on March 5, 2015 at 8:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.